​ब्वाईफ्रेन्डका नाममा यति ठूलो बद्मासी ? « Jana Aastha News Online
​ब्वाईफ्रेन्डका नाममा यति ठूलो बद्मासी ?
प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०७४, शनिबार ११:३१
कतिसम्म हुन थाल्यो भने, मिडिया हाउस चलाउने । छोरीको ब्वाइफ्रेन्डको पनि साथीको जग्गा फलानाले किनिदिएन भनेर मिडिया क्याम्पेनिङ नै ठोकिदिने ! सुन्दा पनि लाजैमर्दो यस्तो काम सुन्धारामा हेड अफिस राखिएको हाउसबाट हुँदा अहिले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण विवादमा छ । होला, खरिद प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि भए गोपाल खड्का वा कोही दोषी भए कारबाही हुन्छ, हुनुपर्छ । तर, कुनै पनि विषयलाई मिडियाले उछाल्ने आधार छोरीका ब्वाईफ्रेन्ड र छोराकी गर्लफ्रेन्ड हुन सक्छ कि सक्दैन ? नेपालमा ‘मिडिया राजनीति’ को एउटा दिक्कलाग्दो पाटोका रुपमा यो घटना विकास भएको छ ।
यी सबै अवस्थाबाट जानकार रहेर भारतले लगाएको ०७२ को आंशिक नाकाबन्दीले नेपाली जनताको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएपछि नेपालमा न्यूनतम ९० दिनका लागि पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताको विकास गर्नुपर्ने अवधारणा विकास भई नेपाल आयल निगमले नेपालको विभिन्न भेग जस्तैः झापा, सर्लाही, चितवन, भैरहवा, धादिङ र कैलालीमा जग्गा खरिद गरी भण्डारण क्षमता विकास गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपालको बौद्धिक जमात एवं पत्रकारिता जगतमा ठूलो आँधीबेहरी उत्पन्न भएको छ । कहिले खोलाको बगर खरिद गरेको शीर्षकमा भने कहिले एकलास विरानो ठाउँमा जग्गा खरिद भएको हल्ला चलेको छ । भारतको बरौनी रिफाइनरी गंगा नदी किनारमा छ भने मथुरा रिफाइनरी यमुना नदीकिनारमा छ । प्रज्वलनशील पदार्थको भण्डारण शहर बस्तीभन्दा बाहिर एकलास ठाउँमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नै हो । तर, चर्का कुरा उठाउनेहरू यो तथ्य स्विकार्दैनन्, फलस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमताको विकास चाहन्छन् । पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको विकास रोक्ने काम नेपालीको हितमा छैन ।